Porn အသုံးပြုသူများကကျွန်ုပ်အားသင်ကြားပေးခဲ့တာ (၂၀၁၀) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
"Jove အားဖြင့်ကဆုလာဘ် circuitry င်!"
“ တစ် ဦး ချင်းစီ၏ကိုယ်ပိုင်အရသာ” အသင်း၏ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသောအသင်း ၀ င်တစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အတွက်ကျွန်ုပ်အားလုံးပါဝင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည်ဆွေးနွေးရန်ဖြစ်ပျက်နေသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမွတ်မပြေနိုင်သောမြင့်မားခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ် ပုံမှန်စွဲသံသရာ၏အမြင့်ဆုံးနှင့်အနိမ့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌။ အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားကယောက်ျားတွေ ၀ င်ရောက်လာတယ် my ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ဖိုရမ်တွင် porn / masturbation စွဲလမ်းမှုအပေါ်ဝေဖန်ပြောဆိုခြင်း။
ပထမတော့သူတို့ပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုနာကျင်ခဲ့ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားယောက်ျားတွေအဆက်မပြတ်အပူလွန်-ကြောင့်သူတို့ရဲ့ limbic ဦးနှောက်မျိုးဗီဇအခွင့်အလမ်းများအဖြစ်ကိုရိပ်မိသောအများကြီးကို virtual အိမ်ထောင်ဖက်မှဖြစ်ကြသည်။ ရုံဝေးကိုကလစ်နှိပ်ပါ, နောက်ထပ်ဝတ္ထု“ အိမ်ထောင်ဖက်” ၀ န်ဆောင်မှုခံယူရန်စိတ် ၀ င်စားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ visitors ည့်သည်များ၏မသိစိတ်တစ်ပိုင်း၊ တကယ်တော့သူတို့ရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါသူတို့ဟာရက်သတ္တပတ်များစွာပြင်းထန်ပြီး၊
ပထမဦးဆုံးအကောင်လေး: ငါဆေးလိပ်ဖြတ်သည့်အခါကခံစားခဲ့ရပုံကိုဆင်တူ Jitter နှင့်အတူလှုပ်ပြီတပြင်လုံးကိုနေ့ဖြစ်၏။
ဒုတိယအကောင်လေး: ငါ့ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများ? အပြင်းအထန်ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်း၊ ပြင်းထန်သောစိတ်ကျဝေဒနာများ၊ ပြင်းထန်သောစိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အကြမ်းဖက်သောအိပ်မက်များ (ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုခံစားခဲ့ရပြီးပြီဖြစ်သည်။ ) အိပ်မက်ဆိုးများကိုမှတ်ထားပါ) အိပ်မပျော်ခြင်း၊ စိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်း (ကျွန်ုပ်သည်“ ရှိနေခြင်း” ဟုခံစားခဲ့ရသောကြောင့်အိပ်ရာမှခုန်ထွက်လာခြင်း)၊ အိပ်ယာပေါ်သို့ကျွန်ုပ်ကိုလှည့်ပတ်သွားလာနေသောအင်းဆက်ပိုးများ၊ လှုပ်ခါခြင်း၊ မုန်းတီးခြင်း (စွမ်းအင်ကို၎င်းကိုအပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ခြင်းထက်များစွာပိုသောစွမ်းအင်), နှင့်အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်း။
တတိယကောင်လေး: ပျင်းလား တစ်ကိုယ်တည်းရာဂ စိတ်ဆိုးနေလား တစ်ကိုယ်တည်းရာဂ ဝမ်းနည်းလား တစ်ကိုယ်တည်းရာဂ စိတ်ဖိစီးမှု? တစ်ကိုယ်တည်းရာဂ ငါအတန်းထဲမှပထမဆုံးတက်ခြင်းမှအောက်သို့ဆင်းသွားသည်။ ဝက်ဘ်အလုပ်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်၊ ကျွန်တော့်ရဲ့ porn နဲ့တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ငွေကောင်းကောင်းရတယ်။ ဒါကငါ့ဘဝပဲ၊ ငါခွဲစိတ်ကုသမှုမခံယူမှီတိုင်အောင်ငါ၌စွဲလမ်းမှုရှိသည်ကိုအသိအမှတ်မပြုခဲ့ပါ၊ သုံးရက်မြောက်နေ့မှာငါဟာတုန်ခါနေပြီးအစက်တွေနဲ့စတင်ချိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ အခြားလက္ခဏာများ - စိတ်တိုလွယ်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း (နံရံများရောဂါလက္ခဏာကိုကြည့်ခြင်း)၊ စိတ်အပြောင်းအလဲများ၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း (တစ်ခါတစ်ရံအတော်လေးပြင်းထန်ခြင်း)၊ ကျွန်ုပ်၏လိင်အင်္ဂါများ၌ဖိအားပေးခြင်း၊ ပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်း၊ အကြောက်လွန်ရောဂါ၊ မိမိကိုယ်ကိုအနိုင်ယူသောအတွေး၊ စိတ်ဓာတ်ကျမှု၊ လွန်ခဲ့တဲ့ရှစ်နှစ်ကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကစပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကူးပြောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မှာလူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘူး။
ငါလည်းကြားသိခဲ့ရသည် -“ ငါဘယ်လောက်ပဲအော်ဂဇင်ရရှိနေပါစေငါဟာဘယ်တော့မှစိတ်ကျေနပ်မှုမခံစားရဘူး။ ငါနောက်ဆုံးတော့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုအတွက်ပြိုကျ, နောက်နေ့နောက်တဖန်စတင်ပါ။ " “ ထွက်ပေါက်ရဖို့ငါအစွန်းရောက်ပစ္စည်းလိုတယ် ဘယ်တော့မှ ရှေ့မှာကြည့်ရှုကြလိမ့်မည်။ " ငါဟာပိုပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေ၊ တခြားသူတွေကိုရှောင်ရှားလိုတဲ့ဆန္ဒပြင်းပြတယ်။ ” ငါမိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားသောအခါငါ စိုက်ထူမရနိုင်ပါ။ "
များစွာသောသူတို့သည်ဘာသာရေးနောက်ခံမရှိကြပါ။ အပြစ်ရှိခြင်း၊ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိနှိပ်ခြင်း၊ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒကိုချောချောမွေ့မွေ့ထုတ်ပစ်လိုက်ပြီ။ ဘယ်သူ့ကိုမှမဖြစ်နိူင်ဘူး၊ ငါဟာယောက်ျားဖြစ်ခဲ့ရင်ငါ့အတွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်အမျိုးသမီးများသည်အားနည်းချက်ရှိသည် limbic ဦးနှောက်လွန်း။
အမျိုးသားများ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုနားလည်နိုင်သည်မှာမှန်သော်လည်းသူတို့၏ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်ပြောင်းလဲမှုသည်သူတို့၏လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုပြန်ပေးဆွဲခဲ့သည်။ သူတို့ကချိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။
Burnham နှင့် Phelan အတွက်ရှင်းပြအဖြစ် Gene ကိုဆိုလိုတာ: လိင် မှစ. ငွေမှစားနပ်ရိက္ခာရန်, ကျွန်ုပ်တို့၏ Primal ဗီဇကိုထိန်းကျောင်းနေခြင်းကျွန်ုပ်တို့၏ပတ် ၀ န်းကျင်သည်ပြောင်းလဲသွားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မူလ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးရိုးဗီဇများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှေ့တွင်တာဝန်ယူသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိ“ ၀ တ္ထုအသစ်များ” ကိုမြင်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏သုခချမ်းသာကိုလျစ်လျူရှုရန်နှင့် ဆက်၍ မြေသြဇာဆက်လုပ်ရန်တိုက်တွန်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သက်သောင့်သက်သာသက်သာစေသည့်အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သောရင်းနှီးဖော်ရွေသောအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုနှင့်ချစ်ခင်ထိတွေ့မှုတို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မပါ ၀ င်ပါက၎င်းသည်အထူးသဖြင့်မှန်ကန်သည်။
အကျိုးကို circuitry ၏အစွန်းရောက်ဆွဖြစ်ပါသည် စွန့်စားရသော။ အန္တရာယ်ကအမွေးထူစွန်ပလွံပင်များသို့မဟုတ်မျက်စိကန်းသွားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်မြန်ဆန်သောမြန်ဆန်သည့်လမ်းလျှောက်စက်ပေါ်တွင်အဆုံးသတ်ထားပြီးရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများရှေ့တွင်ဆက်လက်ရပ်တည်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်တွင်ရှင်သန်နေသောရိုးရှင်းသောအရာများသည်သာယာပျော်ရွှင်မှုများတဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ဇီဝဗေဒပညာရှင် ရောဘတ် Sapolsky မှတ်ချက်ချ:
ဒြပ်အတွေ့အကြုံနှင့်အာရုံခံစားမှုနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်း၏သဘာဝသည်ခိုင်ခံ့ပေါက်ကွဲမှုလေ့၏သဘာဝခိုင်မာတဲ့ဒီဂရီကျလာသော။ ဤသည်မှာနှစ်ခုအကျိုးဆက်များရှိပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအဖြစ်မကြာမီကျနော်တို့ခဲတော့ဘူးဆောင်းဦးရာသီအတွက်အရွက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အပျြောအပါးများ၏ခဏတီးတိုးသတိထားမိ, ဒါမှမဟုတ်ညာဖက်လူတစ်ဦး၏ရှိနေဆဲဟုတစ်ချက်အားဖြင့်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး, ရှည်လျားခက်ခဲများနှင့်ထိုက်တန်တာဝန်ပြီးနောက်လာလိမ့်မည်ဟုဆုလာဘ်၏ဂတိတော်အားဖြင့်။ အခြားအကျိုးဆက်ခဏအကြာတွင်ကျနော်တို့တောင်မှပြင်းထန်မှုအဲဒီအတုလှေမျးမိုးမှ habituate, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ။ ။ ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်ဆိုးကျနော်တို့ hungrier ဖြစ်လာသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ပိုမြန်ဆန်သန်မာ။
ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက်အကျိုးရှိစေမည့်ရှားပါးစုံတွဲတွဲသတ္တဝါများကိုပုံသွင်းပေးသော်လည်းသူတို့၏သိမ်မွေ့သော၊ ပိုမိုကျန်းမာသောဆုများကနာရီပေါင်းများစွာအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောထင်ဟပ်စေသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်မဟုတ်ပါ၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံများလွန်းနေခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ဘ ၀ ၏ပြင်းထန်မှုနည်းသော၊ သို့သော်ပိုမိုသောအရာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်းပိုင်းဟန်ချက်ညီညီလိုအပ်သည် ဖြည့်ဆည်းအပျော်အပါး အဖြစ်ပျော်စရာမှတ်ပုံတင်ရန်ရန်။
ဤသည်နေ့ရက်ကာလ, equilibrium ထိန်းသိမ်းရန်ခက်ခဲသည်။ မတူသည်ဖြစ်စေယနေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုအလွန်ပြင်းထန်သည် ဘာမျှမများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏မုဆိုးစုဆောင်းဘိုးဘေးတွေရဲ့မျိုးရိုးရင်ဆိုင်ခဲ့ ဦး နှောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏နှစ်သန်းပေါင်းများစွာအတွက်။ သေချာတာပေါ့အဲဒီမှာထူးဆန်းမိန်းမဆောင်ခဲ့, နှင့်ဂူမိန်းကလေးများသည်သံသယချစ်ဖွယ်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်သူတို့၏အမြစ်တွယ်နေသောအမြစ်တွယ်နေသောပုံရိပ်များသည်စုံလင်ခြင်းသို့မသွားနိုင်၊ မျက်နှာပြင်တိုင်းတွင် projected နှင့်သုက်ပိုးလှူဒါန်းမှုများအတွက်မဆုတ်မနစ်ညည်းညူ။
ဟားဗတ်စိတ်ပညာရှင် Howard Shaffer က“ စွဲလမ်းမှုအများစုသည်အတွေ့အကြုံ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ။ ။ ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့်အတွေ့အကြုံများ။ ” နှင့်ရှည်လျားသောအချိန် Princeton သုတေသီ Bart Hoebel ကပြောပါတယ်,
အလွန်အမင်းအာဟာရပြည့်ဝသောလိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ [နှင့်အလွန်အရသာရှိသောအစားအစာများ] သည်မူးယစ်ဆေးဝါး၏အစွမ်းထက်အနီးရှိမည်သည့်နေရာ၌မဆို ဦး နှောက်၏ dopamine စနစ်ကိုလှုပ်ရှားနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။
In ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဒါကဦးနှောက်, စိတ်ရောဂါ-Norman Doidge ကြောင်းထောက်ပြ,
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုသည်ဥပစာစကားမဟုတ်ပါ။ စွဲလမ်းမှုအားလုံးတွင် ဦး နှောက်တွင်ရေရှည်၊ တစ်ခါတစ်ရံရာသက်ပန်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုပါ ၀ င်သည်။ ... ငါတို့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသောထပ်တူထပ်မံတိုးမြှင့်သော dopamine သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ကိုပြီးမြောက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့အား ဦး ဆောင်ခဲ့သည့်အပြုအမူများအတွက်တာဝန်ရှိအာရုံခံဆက်သွယ်မှုများကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။ (စ။ ၁၀၆-၈)
ဒီပုံပြင်ထဲမှာကောင်းသောသတင်းကြောင့်ဆုလာဘ် circuitry Overload နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထား furnishes ခဲ့ ဒီလူတွေရဲ့စိန်ခေါ်မှု။ ငါစာနာစွာနားထောင်ရင်းအကူအညီမဲ့တယ်လို့ခံစားလာရတဲ့အခါသူတို့ထဲကတချို့ဟာနောက်ဆုံးမှာသူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ကိုဟန်ချက်ညီအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိလာခဲ့တယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ပြန်တက်လာတယ်။ ယခင်ကသူတို့အပျေါမှာလှည့်အရာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေးမရှိဘဲအသစ်သူတို့အပျေါမှာလှည့်။ သူတို့ကအစွန်းရောက်ပစ္စည်းအဘို့မိမိတို့အရသာဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာဖြေလျှော့ပေး။ စိတ်ဓာတ်နှင့်နောင်တ၏ကျပန်းခံစားချက်တွေကိုအငွေ့ပြန်။ ဟာသနှင့်အကောင်းမြင် bloomed ။ သူတို့ကပရောပစတင်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ s ကိုတိုးတက် elf-လေးစားမှု။ တကယ်တော့သူတို့ရှက်တတ်ဆယ်ကျော်သက်အဖြစ် porn သို့နုတ်ထွက်လျှင်ယေဘုယျအားဖြင့်-ပင်လူမှုရေးအပြန်အလှန်ပျော်မွေ့လာတယ်။
သူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းမလွယ်ကူခဲ့ဘူး, အချို့နေဆဲရုန်းကန်နေကြသည်။ (၎င်းတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုအကြောင်းကို Read ပိုလျှံဖို့လမ်း။ ) ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သူများသည်မိမိတို့အကျိုးကို circuitry reboot မှအော်ဂဇင်အပေါ်တစ်ဦးသည်အသက်ခြောက်ဆယ်ရက်ကြာမျှဆိုင်းငံ့ထားအပေါင်းတို့နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွအကြောင်းကိုလိုအပ်ပုံရသည်။ ဦးနှောက်ကပြော့နဲ့ကြိုးတွေ့သောကြောင့်, လူမှုရေးအထောက်အပံ့ကိုတကယ်ကူညီပေးခဲ့သည်။ တဦးတည်း (ယခုတစ်ရည်းစားရှိပြီးသူ) said:
ထုတ်ယူခြင်းသည်ထွက်လာသည့်အတိုင်းကိုကင်း၊ ဘိန်း၊ ဘော့ဇ်သို့မဟုတ်နီကိုတင်းတို့ထက် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ ငါတက္ကသိုလ်မှာသင်ကြားပြီးနောက်ညစဉ်ညတိုင်းငိုကြွေးမြည်တမ်းနေခဲ့ရသည်။ ငါအိပ်မပျော်ဘူး၊ ငါမှာလုံးဝစားချင်စိတ်မရှိဘူး။ အမြဲတမ်းချိန်းတွေ့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးကကျွန်တော့်ကိုဘောလုံးထဲခုန်ချစေခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာငါဖြစ်၏။ ငါခံစားရတယ် အခမဲ့.